“Thiago Alcântara wuxuu u yimid Liverpool sababtaan” – Adrián – Gool FM
Dajiye September 25, 2020
(Liverpool) 25 Sebt 2020. Goolhayaha reer Spain iyo kooxda kubadda cagta Liverpool ee Adrián ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Thiago Alcântara uu u yimid Reds si uu kula guuleysto koobab.
Thiago Alcântara ayaa u dhaqaaqay safka Liverpool suuqan xagaaga ee hadda socda, wuxuuna kaga soo biiray kooxda Bayern Munich, aduun dhan 30 million euros.
Adrián oo wareysi ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa wuxuu yiri:
“Xaqiiqdii Thiago waa guuleyste, waxaad ku arkeysaa xirfadiisa, wuxuu ku guuletstay koobab badan, sababtoo ah wey iska cadahay inuu ku sugnaa kooxo waa weeyn sida Barcelona iyo Bayern Munich”.
“Waxaan aaminsanahay inuu raaxeysan doono xilli ciyaareedkan, oo ah xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay uu nala qaato”.
“Wuxuu jecel yahay inuu guuleysto, wuxuu u yimid halkan inuu guuleysto, isagoo isku dayaya inuu helo dhamaan koobabka aan u tartameyno xilli ciyaareedkaan”.
“Waxaan gali doonaa waqti aan wada ciyaari doono kulamo badan, waa heshiis aad noogu fiican anaga, waxaan qabaa inuu na caawin doono wax badan”.
“Thiago waa ciyaaryahan heer caalami ah, horey ayaan u aqaanay isaga markii aan aadnay xulka qaranka, waa ciyaaryahan weyn, wuxuuna leeyahay karti, waxaana uu leeyahay baasas, shuudad iyo aragtiyo kala duwan, sidaas darteed in badan ayuu na caawin doonaa”.
“Xilli ciyaareedkaan wuxuu noqon doonaa mid adag, balse wuxuu na siinayaa tayada uu ku raaxeysanayo, waa ciyaaryahan weyn, wuxuuna si fiican ugu habboon yahay qolka labiska, wuxuu si fiican ugu hadlaa luqada Ingiriiska, marka wax dhibaato ah haba yaraatee ma jirto”.